Kedu ihe bụ Drupal? | Blog MarTech
Kedu ihe bụ Drupal?
Fraịdee, June 2, 2017 Satọde, 10 Juun 2017 John Blue
You na-ele anya Drupal? You nụtụla banyere Drupal ma ị maghị ihe ọ ga-emere gị? Ihe ngosi Drupal ọ dị oke jụụ nke ịchọrọ ị so na ngagharị a?
Drupal bụ usoro ihe eji emeghe ihe na-enye ọtụtụ nde webụsaịtị na ngwa. Ọ bụ ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị dịgasị iche iche nke ndị mmadụ gburugburu ụwa wuru ya, jiri ya ma kwado ya.
Ekwadoro m ihe ndị a ka ịmalite ịmụtakwu banyere Drupal:
The Ultimate Guide To Drupal ™ - Usoro Nkuzi nke Nkuzi Video nke Na-egosiputa I Drupal-Imeri Uzo mkpirisi… N'ime 6 awa, Na-enweghị Isi ọwụwa!
Video: Dries Buytaert, onye okike nke Drupal, chịkọtara azịza dịgasị iche iche iji nyere aka zaa ajụjụ ochie ahụKedu ihe bụ Drupal“. Vidiyo a dị mkpụmkpụ na-enye echiche na nghọta banyere etu ndị mmepe, ndị nrụpụta, ndị editọ, na ndị okike ọdịnaya si bịaruo Drupal nso. Obere vidiyo a sitere na Dries Buytaert's keynote na DrupalCon Chicago, Machị 7, 2011.
Book: Iji Drupal na-enye ihe atụ mmejuputa maka ọtụtụ okwu eji eme ihe n'ịntanetị, site na ịmepụta saịtị nyocha ngwaahịa na ịtọlite ​​ụlọ ahịa n'ịntanetị. Ihe atụ jiri ọtụtụ n'ime nyere modul obodo Drupal kere.
Usoro Drupal Podcast
The Olu Drupal usoro pọdkastị na-enye nghọta dị mkpụmkpụ banyere ihe na-eme n'obodo, ihe teknụzụ ndị a na-eji, na otu modulu na-emepe.
The Podcast Podcast usoro a abanyela n'ime etu esi etinye saịtị na Drupal na ebe ndị mmadụ na-atọ ụtọ na-elekwasị anya ike ha na mmepe modul na ịmepụta weebụsaịtị dị egwu.
Akụkọ banyere Drupal
Lelee nnukwu infographic a na akụkọ ihe mere eme nke Drupal site na Ọrụ Weebụ CMS:
Tags: angela byronCMSakpọnwụ byutaertDrupaldrupal cmsdrupal Podcastpọdkastị drupaldrupal olummalite nke drupalakụkọ ihe mere eme nke drupalpọdkastị lullabotiji drupal
John bụ Chief of Community Creation na Mgbasaozi Truffle. Truffle Media Networks na-enye Ag Media Can Nwere Ike Iji, site na ogo dị elu, mmepụta turnkey na kesaa usoro mgbasa ozi metụtara azụmahịa.
Kedu mgbe FTC na-aga ego na Celebrity Endorsements?
Gini mere eji eji Drupal?
Sep 19, 2012 na 2:02 PM
Adị m ebe dị anya pụọ ​​na Joomla na m kwenyere na gị John, Drupal bụ naanị nke kachasị mma. Kedu ka m ga esi esi kparịta ụka maka blọgụ m - http://www.iconicdigitalmarketing.com